Xanuunka Kansarka oo ku soo badanaya Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Xanuunka Kansarka oo ku soo badanaya Muqdisho
Kiisaska la xiriira xanuunka kansarka ayaa ku soo kordhaya Magaalda Muqdisho, waxana xarumaha caafimaadka si joogta ah u gaaraya bukaanada la il daran xanuunkaasi.
MUQDISHO, Somaaliya - Sida ay sheegayaan dhaqaatirka ku taqasustay xanuunka ee ka howl gasha isbitalada ku yaala Magaalada Muqdisho, waxaa xanuunka u badan waweenka, kuwaasoo tiradoodu ay aad u badaneyso marka loo eego ragga uu cudurkan asiibay.
Dr. Cawaale Cabdulaahi Maxamed oo ka howl gala Isbitalka Sumayit ee hoos taga Jaamacada Simad, ayaa tilmaamay in Kansarka haweenka ay la daala dhacayaan uu yahay Midka ku dhaca Naasaha (Breast Cancer) isagoo xusay in kiiskaasi uu aad uga badan yahay kan ku dhaca dhuunta oo isaguna ay qaabileen bukaano haween ah oo la il daran.
Dhaqtarka ayaa sidoo kale warbaahinta la wadaagay in kansarka ku dhaca qanjirada ay la liitaan ragga soo gaaraya xaruntooda, halka midka dhiiga ku dhacana ay tirada ugu badan ka heleen caruurta.
Dhaqaatiirta qaabileysa bukaanada xanuunkan la il daran ayaa ka cabanaya in dhibanayaasha caafimaad ay isbitalada soo gaarayaan xilli uu cudurku marayo waji halis ah,taasoo kalifeysa qaliin gudaha ah ama in ay u diraan mid dibaddeed, maadaama kiiska qaar ay adag tahay in lagula tacaalo gudaha dalka.
Howl wadeennada caafimaadka ayaa kula talinaya bukaannada in ay horey u gaaraan isbitalada marka ay isaga shakinyaan xanuunkan oo astaamihiisu ay ka mid yihiin saxarada oo muddo bil ah aanan qofka aadmiga ah ka imaan, si ay ugu soo beegmaan xaalad lagu dabiibi karo xanuunka asiibay.
Bahda Caafimaadka ee muujinaya walaacan la xiriira kansarka ayaa dawlada Soomaaliya gaar ahaan Wasaarada Caafimaafka ka codsaday in ay hirgaliyeen isbital si gaar ah uga jawaabo kiisaska cudurkan, iyagoo xusay in aanay ku filneyn xarumaha caafimaad ee dalka ka jira isla markaana inta badan ay bukaanadu u baahdaan caafimaad banaanka dalka ah.
Soomaaliya oo ah dal iminka soo kabanayo ayanan lahayn adeeg caafimaad oo si rasmi ah la isugu haleyn karro, waxana taasi ay fudeysaa in Soomaalida ay u geeriyoodan xanuno lala tacaali karo halka kuwa dhaqaalaha heystana ay caafimaadka gudaha ka doorbidaan mid dibaddeed sida in ay aaddaan Dalalka Hindiya, Turkey, Masar iyo Qatar.